Ukuhamba kwakamuva kwe-Apple kubonakala kuqinisekisa ukuqapha i-glucose ku-Apple Watch | Ngivela kwa-mac
UManuel Alonso | 08/05/2021 14:00 | I-Apple Watch
Sekunesikhathi eside sikhona namahemuhemu mayelana nokusebenza okusha okungenziwa yi-Apple Watch elandelayo. Sikhuluma ngomqapha we-glucose. Ngolwazi olungenhla Kubonakale kucaca ukuthi lamahemuhemu abebucayi. Hhayi imisebenzi yezinkampani zesithathu kuphela, uma kungenjalo okwenziwa yi-Apple uqobo. Empeleni isenzo sokugcina osithathile kubonakala kuqinisekisa ukuthi sizoba naleyo mitha entsha ewashini.
Sesikhulume kaningi ngekhono le-Apple Watch lokusebenza njengodokotela ozimele. Ngaphandle kokuthi ayikwazi ukwelashwa, yenza izinto eziningi ezizuzisayo empilweni yethu. Kusivikela ezinkingeni zenhliziyo, kusisiza uma kwenzeka uwe, sigcina inhlanzeko yezandla enhle ... njll. Okulandelayo okufunwa yi-Apple ukusisiza silawule amazinga wethu we-glucose futhi kubonakala sengathi kubucayi kakhulu.
Hhayi kuphela ngenxa yezindaba ukuthi sezivele zagqama mayelana nalobu buchwepheshe obusha, uma kungenjalo ngoba kufanele sicabangele lokho manje i-Apple wethule ucwaningo phakathi kwabasebenzisi I-Apple Watch futhi yababuza ukuthi basebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukulandelela imikhuba yabo yokudla, imishanguzo, namazinga eglucose egazini.
Isithombe-skrini senhlolovo kwabelwane ngayo ne-9to5Mac ngumfundi waseBrazil, othole ku-imeyili yakhe. Ucwaningo lunengxenye enikezelwe kuzici zezempilo, eseziyindawo enkulu yokuthengisa ye-Apple Watch selokhu yethulwa.
Ukulandela le mibuzo, i-Apple nayo ibuza imibuzo mayelana nezicelo ezivela eceleni zokuphatha idatha yezempilo. Ucwaningo lunikeza izinketho ekusetshenzisweni kwezicelo ezivela eceleni zokulandela ukusebenza, ukulandelela imikhuba yokudla (kufaka phakathi i-hydration kanye nokudla), nokuphatha okunye ukunakekelwa kwezempilo (okufana nemithi namazinga wokuqapha amandla) i-glucose yegazi).
Siyazi ukuthi lezi zinhlolovo zisebenzele inkampani ezikhathini ezedlule ukwenza izinqumo. Isibonelo ekususweni kweshaja ku-iPhone 12 entsha namanye amadivayisi. Ngakho-ke singasho ukuthi lo ngumthombo omuhle kakhulu nokuthi unguye ngaphezu kokungenzeka ukuthi sinawo lowo mitha we-glucose ku-Apple Watch 7. Esingakwaziyo ukuthi ngabe kuzoba isoftware noma i-hardware update. Sethemba ukuthi kuzoba ngeyokuqala ngakho-ke nathi sonke singazuza kuyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Ukuhamba kwakamuva kwe-Apple kubonakala kuqinisekisa ukuqapha i-glucose ku-Apple Watch
I-Apple's Developer Academy izongena eDetroit's First National Building